TAAJJABBII -Kutaa 551ffaa – Waa’ee Sum’ii Nyaachifamuu Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollay Jiran Kanaa Taajjabbiin Akkamiin Ilaala?
April 14, 2019 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,TAAJJABBII
TAAJJABBII -Kutaa 551ffaa
Waa’ee Sum’ii Nyaachifamuu Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollay Jiran Kanaa Taajjabbiin Akkamiin Ilaala?
Oromoo, WBO’n Oromoof jecha manaa ba’ee bara dheeraaf jooraa ta’ee ammas gammoojjii Xollay keessaatti dararamuurra darbee Sum’iin faalamaa jira gaafa jedhaman caalaa waan nama aarsu hinjiru. Garaakootu gadde. Egaan gaddi abbaa nyaatti waan ta’eef mee odeeffannoon kallattii hedduurraa walitti qabadhen akka kanaa gadiitti cuunfee hafuura baafadheen boqonnaa sammuu argadha. Dursa dubbiirratti eenyutu balaa kana qaqqabsiise kan jedhun mala dhaha (Hypothesis) koo lafa kaa’a. Egaan, waan ta’e kun Dhalaa’uu Nyaataa (Food/Drink Contamination) ta’uu baatee yoo sum’iitu namoota kanaaf laatame ta’e jedheeni.
Aktiivistoonni Alamuu Simeerratti duulaa turan: Qaama kana hundi keessan beektu. Olaantummaa ‘ego’ isaanii galmaan gahachuuf namoota maallaqaan bitanii shira diigamsa kanaa raawwachuu danda’u. Kun ammoo Alamuu Simee dhimma mooraa sanaarratti gaafatamaa waan ta’eef dirqamasaa hinbaane waan ta’eef dafnee rukuchiifna qabxii jedhurraa ka’uu mala. Haala boora’uu akkanaatiin uummata walitti buusanii diddaa guddaa namicharratti kaasuun muudamarraa namicha rukutuuf ciicata taatiif jedhanii warra aggaaman ta’uu danda’u.
Qaama WBOkootu najalaa miidhame jedhu: Egaan SIyaasni shira. Biyya keenya keessaatti qaamni walsukkuumaa jiru lamman Oromoo keessa akka jiran beekamaadha. Tokko isa biyya bulchu; kan biraan isa uummata qabatee walabummaa Oromiyaaf socho’aa jirudha. Qaamni kun tooftaa ittiin isa biyya bulchaa jiru kana dadhabsiisuuf ‘Network’ mataa ofii uummachuutiin waan kana raawwachuu nimala. Sababiinsaa kun Siyaasa akka addunyaatti akka malee guddaa waan ta’eefidha. Qaama faallaa ta’ee itti adeeman kanas dadhabsiisuun asirraan nisalphata jedhamee waan abdatamuf.
OPDO ta dulloomoo:OPDO keessa ilaalcha guddaa lama jira. Gartuun tokko warra amma jijjiirama jedhanii dalagaa jiranidha; gareen biraan warra isaaniin morman garuu maallaqa kaappitaala gurguddaan abbootii qabeenyaa dawoo godhachuutiin jara dadhabsiisanidha. Isaan ammo warra amma jijjiirama jettee kaate kana rukuchiisuuf shirakana taasisuu danda’u. Maallaqa kan qabu waan baayyee waan hojjetuuf lo’ee lixaankee maallaqa fudhatee #WBO sum’eessuu danda’a.
Qaama keessaa #WBO’n kun cite dhufe: WBO’n Bosona keessaa falmataa jiru warra galan kanatti waan gammadan natti hinfakkaatu. WBO’n galan kunneen baayyeen isaanii gowwomfamaniitu. Koree takinikaa keessaa namoota lamman sanatu akka malee shira hedduu dalage. WBO fi WBO gidduutti shakkiifi waljibbiinsa uumanii turan. Haata’u malee inni bosona keessaafi inni Xoollay keessaa hariiroo dhaba jedhanii yaaduun sobduu nama taasisa. Siyaasni shira isiniin jedheera. Warreen galan keessaas kan maallaqaan tumsamee warra hafte funaansisuuf bobba’e hindhibamne; warri bosonaas karaa baayyee xaxaa ta’een magaalaafi baadiyyaa keessa hanga Xoollayiitti akak nama qaban nishakkama. Qaamni kun egaan waan kana qindeessuu danda’a.
Walumaagalatti OPDOn isheen amma aangoorra jirtu kun Badii kana hingootu. Maaliif naan jedhakaa. Ofirratti ‘Sucide/ofballeessuu hin hojjettu. Gochi akkasii akka ishee miidhu waan beektuuf warri ODP kun kana hingootu. Yoo goote garuu ofiin of ajjeesaa akka jirtu beekamaadha. Gaafa dubbii walitti qabnu garuu itti gaafatama kana hundaa kan fudhatu isaanuma. Maaliif? Akka #WBOn kun waan qulqulluu nyaatee dhuguuf itti gaafatama waan fudhatteef maal nadhibdeedhaan ficcisiisaa kan jiru ishuma. Mootummaadhuma Xoophiyaa kanadha. Oromoonis kan gaafatu mootummaa amma biyya bulchudha. Kan qa’aa bane jara kana ficcisuuf ture isumaka.
Yoo dhuguma Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun keessaa harka hinqabu ta’e Qorannoo baayyee saaynsaawaa ta’e taasisee sabaaf ifa haagodhu. Isa fakkeessaadhaaf nama tokko lama bitanii miidiyaa ofiitiin wacabbarsiisan miti. Qaamni walabaa keesa seenee qoratee adda baasee haagabaasu. Yoos isa amannaati. Kanarraa kan hafe lubbuu ilmaan hiyyeessaatiin taphachuun kun fuula seenaattis ta’e fuula #Waaqayyootti guddaa nama gaafachiisa. Yaadni kun yaada #Taajjabbii qofa waan ta’eef kan abaaruus ta’e eebbisuus barbaaddan anumaaf godhaaka!
Beekan G. Erena, 2019
TAAJJABBII-Kutaa 548ffaa – Xawalwwaalleefi Torontoo: Torban lama booda JSM biyya galuuf qophaa’aa jira. Mudannoowwan torban lamaan gabaasa siniif dhiyeessa. Isa hardhaarraa yoon jalqabe:
TAAJJABBII Kutaa 553ffaa – OMN-PLC-JABBILEE-OPDO-HAJII JAWAR SIRAJ MOHAMMED-SHIRA-TUTTUUQQAA SUM’IIFI CUBBUU-04/16/2019